कलेज बन्द भए पछि बिधार्थी कुलतमा
Thread: कलेज बन्द भए पछि बिधार्थी कुलतमा
24th November 2011, 17:28 #1
बेलायत सरकारले सन् २००९ मार्च महिनादेखि लागू गरेको टायर फो भिसाअन्तर्गत अध्ययनका लागि बेलायत छिरेका नेपाली विद्यार्थी कुलतमा फसेको भेटिएको छ। बेलायत सरकारले लागू गरेको विद्यार्थीसम्बन्धी कडा कानुनले गर्दा यहाँ सञ्चालनमा रहेका निजी कलेज बन्द भएपछि विद्यार्थीहरु कलेज छोडेर लागूऔषध पाउने ठाउँ, जुवाघर, कल्ब र विभिन्न मनोरन्जन केन्द्र धाउन थालेका छन्। कतिपय ठाउंमा चोरीमा समेत संलग्नसमेत भेटिने गरेका छन्।
बेलायतमा नेपालीहरुको बसोबास बढी भएको प्लमस्टेड, अल्ड्रसट, फानब्रो, बेम्ली, हन्स्लो, क्याम्ब्रोली लगायतका क्षेत्रमा बस्ने अधिकांश युवा कुलतमा फसेको थेम्स भ्याली प्रहरीमा कार्यरत कम्युनिटी सपोर्ट अफिसर (पिसीएओ) उमेन्द्र गुरुङले बताए। हङकङ र नेपालबाट अध्ययनका लागि आएका युवाहरुको ठूलो हिस्सा लागू औषधको कारोवार गरेपछि प्रहरीको फन्दामा परेको गुरुङले जानकारी दिए। 'नेपालमा लागू पदार्थ सजिलै पाइने भएकोले कतिपय बिद्यार्थी उतै कुलतमा फसेर बेलायत छिरेका छन्' गुरुङ भन्छन् 'कतिपय त अभिभावकले सुधार्न नसकेर सुध्रन्छन् कि भनेर यता पठाउने गरेको पनि पाइयो।'नेपाली युवाहरुले पाकिस्तानी तथा भारतीय लागू औषध डिलरको सम्पर्कमा रहेर स्ट्रिट डिलरको रुपमा काम गरेको पाइएको समेत गुरुङले बताउँछन्। उनी भन्छन् 'लागूऔषधि खाने र बेच्नेहरु घरमा बसेर खरिदबिक्री गर्छन्।'
लागू औषधको किनबेचमा संलग्न युवाहरुले आ-आफ्नो कार्यक्षेत्र समेत छुट्ट्याएका छन्। 'एक ठाउँमा क्रियाशील व्यक्ति अर्को ठाउँमा जान नपाउने उनीहरुको नियम छ' उनले भने। उल्लंघन हुँदा बेला बेलामा एकआपसमा हिंसात्मक झैझगडा हुने गरेको पनि गुरुङले जानकारी दिए।
'लागू औषध कारोबारीको ठूलै सञ्जाल यहाँ सक्रिय छ, त्यो सञ्जालमा धेरै नेपाली फसेका छन्' गुरुङले भने। हालैमात्र लागू औषधको विवादमा वेलायतको रेडिङमा नेपाली र पाकिस्तानीबचि कुटाकुट भएको गुरुङले जानकारी दिए।
गुरुङले नेपाली बिद्यार्थी लागू औषध र चोरीको अभियोगमा पक्राउ परेको पनि बताए। उनका अनुसार रेडिङ क्षेत्रमा ७ वटा नेपालीको घरमा चोरी भएको र त्यसमा अधिकांश नेपाली युवा संलग्न रहेको पाइएको छ। सुनको चोरी अत्यधिक बढेको गुरुङले बताए।साँझपख नेपाली बसोबास गर्ने क्षेत्रका जुवाघरमा नेपालीहरुले खचाखच भरिने गरेको समेत उनले जानकारी दिए। वेलायतका ख्याती प्राप्त जुवाघरहरु कोरल, प्याडी पावर, बेट ३६५, ल्याडब्रुक, बेल्यिम हिल, टुटेस्पोर्समा विद्यार्थी लगायत अन्य पेशामा कार्यरत नेपाली पनि नियमित जाने गरेका छन्। वेलायतमा श्रीमान-श्रीमती दुवैले काम गर्ने चलन छ कतिपयले हप्ताभरि कमाएको पैसा जुवाघरमा सकेर श्रीमतीको कमाइ माग्दा पारिवारमा झगडा भएर प्रहरीमा उजुरी परेकोसमेत गुरुङले जानाकारी दिए।
थेम्स भ्याली प्रहरीमा ५ बर्षदेखि कार्यरत गुरुङले अपराधमा नेपालीको संलग्नता क्रमशः बढिरहेको बताए। 'अभिभावकको लापरबाहीले गर्दा अधिकांश युवाहरु कुलतमा फसेका छन्, आफ्नो छोराको कमजोरी लुकाउन खोज्दा सिंगो अपराध लुकेको अभिभावकले पत्तै पाउँदैन। त्यो बिस्तारै ठूलो अपराधको सञ्जाल बन्छ' गुरुङले भने। गुरुङले अविभावकलाई बेलैमा सचेत भएर दुव्यर्सनमा लागेकालाई विज्ञकहाँ लगेर उपचार गर्न समेत सुझाए।
विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्न नेपाली दूतावास बेलायतले सम्बन्धित निकायमा छलफल चलाइसकेको बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा सुरेशचन्द्र चालिसेले बताए।'यो समस्या नेपालीको मात्र होइन सबै अन्तर्राष्ट्रिय सबै बिद्यार्थीको हो। मुख्य त नेपाल, भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानबाट आएका बिद्यार्थी मर्कामा परेका छन्। मैले दक्षिण एसियाबाट आएका राजदूतसँग संयुक्त रुपमा बेलायत सरकारलाई दबाब दिन सकिन्छ कि भनेर कुरा बढाएको छु। अहिले छलफल भइराखेको छ' राजदूत डा चालिसेले भने। यसअघि नै समस्याको समाधानका लागि बेलायती परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नेपाली दूतावासले आग्रह गरिसकेको पनि उनले जानकारी दिए।
नेपालीहरु बिभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको जानाकारी बेलायतको सरकारी निकायले दिने गरेको नेपाली दूतावास लण्डनले पनि पुष्टि गरेको छ। दूतावास अधिकारीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिक मर्यादा अनुरुप कुनै देशको नागरिक अपराधिक गतिविधिमा लागेर प्रहरीले पक्राउ गरेमा सम्बन्धित देशको कुटनीतिक नियोगमा जानकारी गराउने प्रचलन छ। सोही अनुसार बेलायत सरकारले बेलाबेलामा खवर दिने गरेको छ। ती अधिकारी भन्छन् 'आफ्नो नजिकको नियोगमा खबर गराउने वा नगराउने अधिकार अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई समेत हुने भएले सबै जानकारी हामीलाई आउँदैन। नेपालीहरु बेलायतमा आपराधिक गतिबिधिमा लागेको बारे नेपाली दूतावास जानाकार छ तर दूतावासको आफ्नै मर्यादा र कार्यक्षेत्र हुने हँुदा सबै बिवरण थाहा हुँदैन।'
गैरआवासीय नेपाली सघं यूकेका अध्यक्ष कुल आचार्यले नेपाली बिद्यार्थी कुलतमा लागेको खबर प्रसस्त सुन्नमा आएको बताए। बेलायतमा बिद्यार्थीहरुमा समस्या रहेको बताउँदै आचार्यले काठमाडौंबाट बिद्यार्थी भिसामा आएकी लक्ष्मी लामाले दुई साताअघि आफू बस्ने घरको सातौं तलाबाट हाम फालेर आत्महत्या गरेको जानकारी दिए। आचार्यका अनुसार लामाले लामो समयदेखि डिप्रेसनको औषधि सेवन गर्दै आएकी थिइन्। 'हाम्रो अहिलेको चुनौति भनेको यही नै हो सामाजिक बिकृति बढ्दै गैरहेको छ यसप्रति हामी सबै सजग हुन जरुरी छ' उनले भने। छोरा-छोरी विदेशमा छन् भनेर नेपालमा ढुक्क भएर नबस्न अविभावकलाई आचार्यले सुझाए। अभिभवाकले आफ्नो परिवारको सदस्य विदेशमा के काम गर्छ र कस्तो ब्यक्तिको संगतमा छ, त्यसको नियमित हेक्का राख्नु पर्ने आचार्यले बताए। लामा गरिरहेको काम छुटेपछि डिप्रेसन भएको बताएको छ।
कलेज सञ्चालकहरु पनि बिद्यार्थी कलेज नआएको स्वीकार्छन्। तर कुलतमा लागेको बारे अनभिज्ञता देखाउँछन। क्विन्सल्याण्ड कलेजका संचालक कृष्ण भट्टले भने 'बिद्यार्थीहरुको समस्या कलेज सञ्चालकका कारण आएको भन्ने हल्ला मात्र हो। यो बेलायत सरकारको राष्ट्रिय नीति परिवर्तन भएकोले हो। बिद्यार्थीहरुले निजी कलेजमा भविष्य नदेखेर कलेज छोड्नुको दोषी बेलायत सरकार भएको उनको जिकिर छ। 'बिद्यार्थीले भिसा लिँदा एउटा नियम थियो, वेलायत आएपछि अर्को नियम आयो त्यसैले एक अर्को नियममा तालमेल नमिलेपछि बिद्यार्थी र कलेज संचालक दुवै नियम उल्लंघन गर्न बाध्य भए। जसले गर्दा सरकारले कडा कानुन बनायो' भट्टले भने। 'निजी कलेज धमाधम बन्द भइरहेका छन्, कुन कलेज कति बेला बन्द हुन्छ ठेगान छैन। बिद्यार्थी अन्योलमा छन। अन्योलमा परेको वेला सामाजिक र आर्थिक रुपमा सहयोग नपाएपछि बाध्यताले कुलतमा लागेको हुन सक्ने उनले बताए।
यस्तै, लामो समयदेखि बेलायतमा अध्यागमन सम्बन्धी अदालती पैरवी गर्दै आएका सोलिशिटर राजु थापाले नेपाली बिद्यार्थी ठगीमा पनि संलग्न भएको बताए। बिद्यार्थी र तिनका डिपेन्डेन्टको काम गर्ने अधिकार खोसिएपछि ठगी बढेको उनले बताए। 'मेरोमा ठगी सम्बन्धबिच्छेद लगायतका मुद्दा आएका छन्। बेलायत आउँदा नक्कली विवाह गरेर आएकाहरु अहिले सम्बन्ध बिच्छेदको चक्करमा छन्। सामाजिक बिसंगति अत्याधिक बढेको छ' थापाले भने। पढ्नभन्दा कमाउन बेलायत आउने संस्कृतिले समस्या आएको थापाको विश्लेषण छ। कलेजहरुलाई वेलायत सरकारले कडा अनुगमन नगर्दा कलेज संचालक पैसा लिएर भाग्ने प्रवृति पनि बढेको उनले बताए। 'त्यसको प्रत्यक्ष मार बिद्यार्थीलाई पर्न गयो' थापाले भने। कलेज बन्द भएपछि हज्जारौं बिद्यार्थी गैरकानुनी रुपमा बस्न बाध्य भएको पनि उनले बताए। 'कतिपय त गैरकानुनी रुपमा तेस्रो मुलुकमा बिस्थापीत भएका छन्' थापाले भने।
बेलायतमा अध्ययनका लागि आएका सयौं बिद्यार्थी फ्रान्स, जर्मनी, बेल्जियम, स्पेन, पोर्तुगल लगायतका देशमा गएर शरणार्थी बन्न आवेदन दिएका छन्। बेलायत सरकारले यसअघि ३ मार्च २०१०, २१ अप्रील २०११, ४ जुलाई २०११ मा बिद्यार्थी सम्बन्धी कानुन कठोर बनाएको छ।
24th November 2011, 17:33 #2
tyo mathi ko news maile www.nepalbritain.com bata paste gareko ho,, BUT I LOVE TO COMMENT THT;S WHY I BRING IT HERE.
होइन हजुर नेपाली बिद्यार्थी मात्र नशालु काम गर्छन ?अनि हाम्रो ब्रिटिश गोर्खा को छोरा हरु पनि त होला नि
मैले देखे अनुसार हाम्रो नेपाली दाजु भाइ हरु हो
तपाई ले हामी नेपाली भन्नुस
मलाई अचम्म के लाग्यो भने
हजुर को nrn ले कुनै बेला सभा नि राखेको थियो
खोइ त ?
त्यो बन्द भाको कलेज को मालिक लाइ सोध्नुस
आखिर किन बिद्यार्थी को हालत यस्तो भयो
त्यो कलेज को मालिकहरुनी झन् खतरनाक नसालु काम गर्छन
बिद्यार्थी को जीवन भविस्य संग खेल्छन
अब कृष्ण भट्ट जी लाइ सोधेर सरकार लाइ दोष
अब त्यहि सरकार ले कमाइ को बाटो देको छ
बिद्यार्थी आफ्नो भविस्य बनाउन अरु देश गएर सरनार्थी मागेको छन्
यहाँ को मालिक हरु नि कुनै जवानामा सरनार्थी नै थिए होलान
,,,,,,,,,,,,,कि कसो राजु थापा दाइ
आज को दिन मा बेलायत मा नेपाली हरु कुरा धेरै गर्छन ,आफ्नै नेपालीलाइ सहयोग धेरै नै कम गर्छन सायद मेरो सब्दहरु तितो छ
, तर यो सब्द ले मान्छे को पित्त को नजिक को चित्त दुख्छ
विश्वास गर्नुस १ दिन यो सब्द ले निको नि हुन्छ
24th November 2011, 18:27 #3
well said england hotmale......thumbs up brother..
24th November 2011, 22:55 #4
Dukkha lagyo samachar padera.....NRN le election bahek aru kehi kam pani garney po ho ki??